Njikwa nchekwa, Document Bag, Plastic aka uwe - Ruiyinxiang
Crafts & ncheta
Akọrọ ichicha n'akpa uwe
L nkebisi nchekwa & mpempe akwụkwọ na-echebe
Magnetik White Board
Eyi Plastic Products
Ịkwanyere Document igbe
Kere na R & D
Anyị ụlọ ọrụ guzobere anyị imewe ngalaba. Anyị na-enye OEM & ODM ọrụ.
Anyị nwere ọkachamara ahịa otu, nke na-ere anyị ngwaahịa n'ụwa nile. Anyị isi markrts nọ EU, North America na South Asia. "Client bụ nke mbụ" bụ anyị edumbet.
Guangzhou Ruiyinxiang agụmakwụkwọ Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa pụrụ iche na-amị agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ na-enye. Anyị na-e exporting agụmakwụkwọ na office onunu maka 9 afọ. Anyị nwere ezi nkà exporting na Europe, America, na Middle East, Southeast Asia na Africa.
Anyị website bụ online.
10 puku square mita factory nwere ike inye karịa 100 puku mkpụrụ ọma ngwaahịa kwa ọnwa. New ngwaahịa nwere ike inyere gị ẹkemụm mpaghara gị ahịa n'oge mpi. Ọzọkwa, ezi uche uru nwere ike inyere anyị R & D otu ịzụlite ihe ọma na ihe mara mma na ngwaahịa na-enyere anyị na-arụ ọrụ na-a rai ...
No.238 Yunxiang Road Baiyun district Guangzhou, China
Fireproof Expanding File Folder, PVC File Folders, Kraft Paper Envelope Folders, 9 eri ego Trading Card aka uwe , DuPont Paper CrossBody Bag,